Wasiir Juxaa “Dalkaan waa la wada leeyahay cid kasta oo naga feker duwan waan la hadleynaa”+COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wasiir Juxaa “Dalkaan waa la wada leeyahay cid kasta oo naga feker duwan waan la hadleynaa”+COD
Iyadoo uu taagan yahay Khilaaf xoogan oo u dhaxeeya Maamul Goboledyada dalka ka jira iyo Dowladda dhexe ee dalka, ayaa Wasiirka arrimaha Gudaha Iyo Dib u heshiisiinta Xukuumadda Somaliya Cabdi Faarax Siciid (Juxaa) wuxuu sheegay in Dowladda diyaar u tahay la hadalka cid kasta oo ka feker duwan.
Wasiir Juxaa, ayaa wuxuu sheegay Dowladda Somaliya inay diyaar u tahay la hadalka dadka ka aragtida duwan, xittaa sida uu yiri kuwa xabada ku soo ridaya Dowladda.
Mr Juxa ayaa sheegay in howlaha Wasaaraddiisa wado ee dib u heshiisiinta ay sii soconeyso, isagoo qiray waxyaabaha la isku haayo ay kala gedisan yihiin, isla markaana ay kala heerar yihiin.
“Dib u heshiisiinta waa ay soconaysaa, waxa la isku haayana waa ay kala gedisan yihiin, kala heerar weeye, meelo kala duwan ayaa wax ka taagan yihiin, waxyaabo kale oo Siyaasadeed, Kheyraad iyo Dastuurba waa ay jiraan waqti ayeey qaadanaysaa, Cidii naga feker duwan oo naga maqan oo xabad nagu soo rideysa in aan la hadalno diyaar baan u nahay, dalkaan waa la wada leeyahay, aniga ma lihi Dowladda malahan dadka oo dhan ayaa wada leh.” Ayuu yiri Wasiirka arrimaha Gudaha Somaliya.
“Intii jirta cid rabta wada hadal oo leh waxaan ayaa naga dhaxeeya aan ka wada hadalno, Miiska wada hadalka waa uu furan yahay Diyaar baan u nahay.” Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Wasiir Juxaa.
Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaa wajaheysa culeysyo siyaasadeed oo gudaha iyo dibadaba, iyadoo dadka siyaasiyiinta ee dhaliilsan qaabka dowladdiisa wax wado ay ku eedeynayaan albaabada Madaxda ay xiran yihiin, isla markaana aaya ka talinta dalka uu gacanta u galay shaqsiyaad kooban.